အစ်ကို့ မိန်းမ အိပ်ချင် သီး – KZ’s ထမင်းဆိုင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Food, Drink & Recipes » အစ်ကို့ မိန်းမ အိပ်ချင် သီး – KZ’s ထမင်းဆိုင်
အစ်ကို့ မိန်းမ အိပ်ချင် သီး – KZ’s ထမင်းဆိုင်
Posted by ဇီဇီ on Mar 16, 2015 in Food, Drink & Recipes, How To.., Society & Lifestyle | 47 comments
အကို့ မိန်းမ – မရီး
အိပ်ချင် – သန်း
မရီးသန်း ဆိုတော့ မရမ်းသီးပေါ့။ ဟိ။
ငယ်တုန်းကတော့ စကားထာဖွက်ရင် အဲလို ဖွက်တာပဲ။
ဆေးဖက်ဝင် မရမ်းသီး (http://yinfamily24.blogspot.sg/2013/03/blog-post.html)
မရမ်းသီးသည် သွေးဝမ်းသွားခြင်း၊ ၀မ်းကိုက်ခြင်း၊ သွေးကြောင့်ဖြစ်သောရောဂါ၊ အဖျားဟောင်းနှင့် ကိုယ်တွင်းပူ လောင်ခြင်း၊ အသားကြား အရိုးကြားတို့၌ နာက…ျင်ကိုက်ခဲခြင်းတို့ကို သက်သာပျောက်ကင်းစေသည်။
မရမ်းသီးကို သုပ်စားခြင်း၊ ချက်စားခြင်း၊ စသည်ဖြင့် ပြုလုပ်စားသုံးပါက ခံတွင်းပျက်ခြင်းနှင့် ခံတွင်းအရသာ မပေါ်ခြင်းတို့ကို သက်သာပျောက်ကင်းစေနိုင်သည်။
၀မ်းကိုက်ခြင်း၊ မီးယပ်ဝမ်သွားခြင်းများအတွက် မရမ်းသီးဆားရည်စိမ် အရည်သောက်ပေးခြင်း၊ ဆားရည်စိမ် မရမ်းသီးကို သုပ်စားပေးခြင်းဖြင့် ၀မ်းကိုက်ပိုးများကို သေစေနိုင်သည်။
အသည်း အဆီဖုံးသော ရောဂါများကို ပျောက်ကင်းစေရန်နှင့် အဆီများသော သားငါးများတွင် မရမ်းသီးထည့်၍ ချက်ပြုတ်ခြင်းဖြင့် ပိုလျှံနေသော အဆီများကို ချေဖျက်နိုင်သည်။ အထူးသဖြင့် မရမ်းစေ့များကို ၀မ်းပိတ်ဆေးများတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။
ခါတော်မှီ ဓာတ်ပုံထည့်ချင်လို့ စနေနေ့က ဈေးသွားပြီး ဝက်ခေါင်း နဲ့ ငါး ဗိုက်သား ရှာတာမရလို့။
ဝက်ခေါင်း နဲ့ မရမ်းသီးချက် (ခွက်ဒစ်တူ ခက်သီ)
ဝက်ခေါင်းကို စင်ကြယ်အောင် ဆေးပြီးအရွယ်တော် တုံးတစ်
သစ်ကြမ်းပိုးခေါက် ထည့်ပြီး ပြုပ်
နူးခါနီး ရင် ဆားသင့်အောင် ထည့်
မရမ်းသီး ၂၀ လုံးကို ထက်ခြမ်းခွဲပြီး
အဆံထုတ်ပြီး ဆားနဲ့နှယ် ဆေး
ဆီ ၁၀သားလောက်နဲ့ ကြက်သွန် ဖြူနီ ငပိ ကို မရမ်းသီး ၂ လုံးစာလောက်ထည့်ကြော်
နွမ်းသွားရင် ငြုပ်သီး ကြမ်းမှုန့် ထမင်းစား ၁ ဇွန်း ၂ ဇွန်းလောက် ထဲ့
ငြုပ်မှုန့် ကျက် လောက်ပြီ ဆိုရင်
ဝက်ခေါင်းပြုပ်တွေ ထည့်ဆီနဲ့ လှိမ့်
နောက်ပြီး ဝက်ခေါင်းပြုပ် ရည် ထဲ့ပြီး
ပြီးရင် အပေါ့အငန့်မြည်း ပြီး
အချိုမှုန့်အစား သကြား နည်းနည်း ထဲ့လို့ရတယ် ။
မြန်မာ ငရုတ်သီးစိမ်းမရလို့ အကျက်မှုန့်နဲ့ ထည့်ကြော်လိုက်ရတယ်။
မရမ်းသီး ပုစွန်ဆိတ် ငရုပ်သီးစိမ်းချက်
မရမ်းသီး ပုစွန်ဆိတ် ငရုပ်သီးချက်
ပုစွတ်ဆိတ် – ၃၀၀ ဂရမ်
မရမ်းသီး- ၄ လုံး (ပါးပါးလှီး)
ငရုပ်သီးစိမ်း- ၅ တောင့် ထောင်း
ကြက်သွန်နီ – ၂ ဥ ထောင်း
ကြက်သွန်ဖြူ – ၆ မွှာလောက် ထောင်း
ခရမ်းချဉ်သီး – ၂ လုံး ပါးပါးလှီး
ပြီးရင် ငရုပ်သီးစိမ်း ထောင်းထားတာကိုပါ ထည့်မွှေပါတယ်။
ဆား ငံပြာရည်သင့်တော်သလောက်ထည့်ပြီး ပုဇွန်ဆိတ်လေးတွေ
ပုဇွန်ကျက်ခါနီးမှာ မရမ်းသီးပါးပါးလှီးတွေကို ထည့်
ပုဇွန်ရော မရမ်းသီးရော ကျက်ရင် ဆား၊ အရသာမြည်း လိုတာထပ်ထည့်ပြီး အဆင်သင့်စားလို့ရပါပြီ ။
မရန်းသီးအစ်မ်း = ၁၀ လုံး
ကြက်သွန်နီ = ၃လုံး
ငံပြာရည် = အနည်းငယ်
မျှင်ငါးပိမီးဖုတ် = အနည်းငယ်
နှမ်းလှော် = အနည်းငယ်
ကြက်သွန်ဖြူဆီချက် – အနည်းငယ်
မရန်းသီးများကို ထက်ခြမ်းခွဲပြီး အစေ့ထုတ်ပါ။
ရေဆေးပြီး ပါးပါးလှီး၍ ရေစစ်ထားပါ။
ကြက်သွန်နီလည်း ပါးပါးလှီး၍ ရေစစ်ထားပါ။
အဆင်သင့်ဖြစ်လျှင် မရန်းသီး၊ ကြက်သွန်နီ၊ ပုစွန်ခြောက်၊ ငံပြာရည်၊ မျှင်ငါးပိတို့ကို ထည့်၍ ဆီချက်လောင်းသုပ်ပါ။
အစပ်ကြိုက်လျှင် ငရုတ်သီးစိမ်းထည့်၍ သုပ်ပါ။
စိမ်းစားငပိ နဲ့ ကြက်သွန်ဖြူနီ ဆီသတ်ပြီး
မရမ်းသီးခွဲခြမ်းရေစိမ် ကိုထည့် ကြော်
နွမ်းလာရင် ရေနည်းနည်း ထည့်ပြီး အိအောင် နှပ်
အိလာရင် ရေခမ်းဆီပြန် လုပ်ပြီး
ငြုပ်ကြမ်းမှုန့်နဲ့ ပုစွန်ခြောက် ရေစိမ်ကို ဆယ်ပြီးရေစစ်ပြီးသားကို ထည့်ကြော်
ဆီနဲ့ လိပ် နေအောင် ကြော်၊
မွှေးအောင် လို့ ငြုပ်သီးစိမ်း ထက်ခြမ်းခွဲထည့်ပါ။
ငါးဗိုက်သား – ၅၀၀ ဂရမ် (ဆားဆနွင်းနယ်)
မရမ်းသီး – ကြီးရင် ၄ လုံး၊ သေးရင် ၆ လုံး
ကြက်သွန်နီ – ၂ ဥ (ထောင်း)
ဖြူ – ၅ မွှာ (ထောင်း)
ငရုတ်သီးစိမ်း – ၄ တောင့်
ခရမ်းချဉ်သီး,အရောင်တင်, ကြက်သွန်ဖြူနီ ဆီသတ်ပြီး
ခုနကလိုပဲ မရန်းသီးထည့် ကြော်၊
ရေနည်းနည်းထွက်ချိန်ကို ဆားဆနွင်းနယ်ထားတဲ့ ငါးဗိုက်သား အတုံး ကြီးကြီး တုံးထားတာလေးတွေ ထည့်။
သူအရည်နဲ့သူ အရန်း မမွှေပဲ အိုးလှုပ်ရုံ (ဟင်းအိုး ပြောတာ) လေး ဖုံးပြီး ဆက်တည်ထားး
စိတ်ကြိုက်အနေရောက်မှ ငရုတ်သီးစိမ်းခြမ်းထည့်၊ နံနံပင်လေး အုပ်ပြီး စားလို့ရပါပြီ။
အဆီများတဲ့ ငါးဗိုက်သားများ ရခဲ့ရင် အဲလိုချက်တာ စားလို့ကောင်းပါဒီ။
မရမ်းသီး အချိုစိမ် နဲ့ အချိုတည်း
စားချင်တိုင်း (ဆားး၊ မဆလာ၊ သကြား၊ ငရုပ်သီး မှုန့် ဆတူရောထားတဲ့) အမှုန့်လေးနဲ့ တို့စားလို့ ရပါဒီ။
မရမ်းသီး (150 g) ကိုရေဆေး ထိပ်ဖြတ် နှစ်ခြမ်းခြမ်း အစေ.ထုတ်ထားပါ။
မျှင်ငပိကင် (သို.) ငပိထောင်း- ထမင်းစားဇွန်းတစ်ဇွန်း
ပုဇွန်ခြောက် – ထမင်းစားဇွန်း2ဇွန်း
ငရုတ်သီးစိမ်း (ဒါမှ မဟုတ်) ငရုတ်သီး အခြောက်တောင့်ကြော် – ၄ တောင့်
ကျနော်ကတော့ ပုဇွန်ခြောက်ကို ထောင်းပြီး ဖယ်ထား
ငပိနဲ့ ငရုတ်သီးစိမ်း မီးကင်ကို ထောင်း ဖယ်ထား
ပြီးမှ မရမ်းသီးနဲ့ ဆားကို ထောင်းပြီး ဖယ်ထားတာတွေကို နှံ့အောင် နယ်ပြီး ထပ်ထောင်းလိုက်ပါတယ်။
ပြီးမှ ဆီလေး စိမ်ထားပြီး စားချင်တဲ့ အချိန်စားရုံပါပဲ။
မရမ်းသီးက အစိမ်းနဲ့အမှည့် ၂ မျိုးမှာ အစိမ်းပဲ ကြိုက်လို့ ..
ပြီးတော့ ဒီရာသီ ပေါ်တဲ့ မရမ်းသီးကို အဝ စားချင်သူတွေ….
နိုင်ဂျန်ဂါးကို အများကြီးသယ်လာပြီး ဘာလုပ်ရမှန်းမသိသူတွေအတွက် …
တစ်ရက်တည်း စားဖို့ ပြောတာဟုတ်ဘူးနော်။
သွားတွေ ကြွေကျကုန်ရင် တာဝန်ယူဘူးး
တခြား မရမ်းသီးချက်နည်းလေးများရှိရင် လိုချင် ပါတယ်။
ငါးနဲ့ မရမ်းသီးခြောက် အရည်သောက်။ (ခွက်ဒစ်တူ ခက်သီ)
ငါးနဲ့ မရမ်းသီးခြောက် အရည်သောက်။
ဂျင်း၊ စပါးလင်၊ကြက်သွန်ဖြူ + ကြက်သွန်နီ၊ ငြုပ်သီးမိုးမျှော် ငြုပ့်ကောင်း နဲနဲ ထောင်း
ထောင်းထားတဲ့ အရာတွေ ဆီသတ်ပြီး မရမ်းသီးခြောက်ထည့်၊
ဆီလုံးရင် ငါး ထည့်ရုံပါပဲ။
ပြီးရင် ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ပမာဏအတိုင်း ရေအေးလေးထည့်ပြီး ဆူအောင် တည်။
အပေါ့်အငံ အရသာ အတွက် အရသာမှုန့် နဲ့ ငံပြာရည် သုံးတယ်
အချဉ် အတွက် မရမ်းသီးခြောက် သုံးပါတယ်
ချဉ်ဟင်း ကျက်လုရင် ……
ရှားနံနံရွက် အုပ်လိုက်ယုံ ဆို….ငါးပြုတ် တခွက် ရလေါက်ပါပြီ …
မရမ်းသီးကို တစ်ပတ်လုံးစာ စီးရီးဆွဲပေးပါလားဟင်
အဲဒီ တစ်ပတ်စာ စီးရီးဆွဲဖို့ မရမ်းသီးတွေ ပို့ပေးလေကွယ်။
မရမ်းသီးကိုတော့ အရမ်းကြိုက်တယ်….။ ဒီရာသီလိုမျိုးဆို အကိုက်….
အပေါ်က မချွိတင်သမျှ မရမ်းသီးစားစရာတွေထဲ အကုန်ကြိုက်လို့…။ ဘယ်ဟာ အကြိုက်ဆုံးလို့တောင် ရွေးမရ….
မရမ်းသီး ငပိချက်၊ ၀က်သား မရမ်းသီး၊ အစိမ်းသုပ်…
အားလုံး ဂွဒ်ရှယ် ချည့်….
ဝက်ခေါင်းနဲ့ ငါးဗိုက်သား မရသေးခင် မရမ်းသီးကုန်ပြီ။
အချဉ်​မစားနိုင်​လုိ့ မရမ်းသီး မစားဖြစ်​ဘူး။
မရမ်းသီးအ​ခြောက်​နဲ့ ၀က်​သုံးထပ်​သားချက်​​တော့ ကြိုက်​တယ်​။
မရန်းသီး အခြောက်ထားစခန်းကို မရောက်လိုက်ဘူးး
နောက်ခါမှ မရမ်းသီးခြောက်လေး မှာအူးမှ။
.စော်ဘွားကြီးကုန်းက ခင်တဲံ့ မိတ်ဆွေ အိန္ဒိယ အမျိုးသားတယောက်ကို
ရွာ့ဘုန်းကြီးကျောင်းဝန်းကြီးထဲ မရမ်းပင်တွေ အများကြီး
အပင်တွေပေါ် တက်တက်ပြီး ခူးစားကြတာ
အစိမ်းဆိုလည်း ရခိုင်မျှင်ငါးပိစိမ်းစားလေး ကင်ပြီး ယူသွားကြ တို့တို့စားကြတာ
အဲ့ဒီအချိန်ကိုလည်း ပြန် သတိရတယ်
မရမ်းသီးနဲ့ ငပိကို ပြောတာ။
အရောင်ထဲမှာ မရမ်းစေ့ရောင်လည်း ကြိုက်တယ်။
အဲ့ ဦးမရမ်းသီးလည်း မရမ်းစေ့ရောင် ရှပ်အကျီ င်္တွေ သိပ်ဝတ်တာပဲ
အင်းး မမဂျီးနဲ့သူ့ကို တခါလောက် မိတ်ဆက်ပေးရကောင်းမလားးး
စတာနော်။ တကယ်မိတ်ဆက်ပေးဖို့ မတောင်းဆိုပါနဲ့
ဦးမရမ်းသီးက ရှာရွတ်ခန်မ်းကို လေထိုးပြီး ဆေးအမည်းသုတ်ထားတဲ့ ဥပဓိနဲ့ပါ
အခုရက်​ဖြစ်​​နေတဲ့ ၀မ်းပျက်​နဲ့ ကွက်​တိမို့အနားမကပ်​ရဲ​သေး
သော်က အစားအသောက် ဆင်ခြင်ဦးးး
အချိန်​အတွယ်​​တွေက တိတိကျကျ လုပ်​ပါဗျ ။ ဘယ့်​နဲ့ ” အနည်းငယ်​” တို့ ” အ​နေ​တော်​ ” တို့ဆိုတာက မတိကျဘူး ။ ပြီး​တော့ ဂ ရမ်​ ဆိုတာကလည်း ကျုပ်​တို့နဲ့ ရင်းနှီး တဲ့ အချိန်​အတွယ်​မဟုတ်​ပြန်​ဘူး ။ ​ဒေသန္တာရ အသုံးအနှုန်း နဲ့ ပျံပြသင်​တယ်​ ။ အုပမာဗျာ ၅၀၀ဂရမ်​= ၃၀.၅ ကျပ်​သား တို့ ဘာတို့ ​ပေါ့ အဲ့သာမှ လူတိုင်း နားလည်​မှာ​ပေါ့ ဂျ
ဥနိ လာမယ်လို့တော့ ထင်သားကလားး
ကျနော်က ဘယ်တော့မှ ချိန်တွယ်မချက်ဘူးဗျ။
အကြိုက်မတူတဲ့ အရသာတွေ အတွက် ကာဗာယူထားတယ်ပဲမှာပါလေ။
ဖိုက်တင်းဘောကို မရမ်းသီးနဲ့ ပြုတ်ဆား.. ကောင်းအိ
စိတ်အချဉ်ပေါက်လို့ မရမ်းသီးပို့(စ) တင်ရင်း ဖိုက်တင်းဘော အကြောင်း ပြောမလို့ စိတ်နာလို့ မပြောတော့ဘူးဆိုပြီးးး
၃၀ဂရမ်ဟုတ်ဘူး…… ၃၀၀ဂရမ်လောက်တော့ထည့်ပါဟယ်… သများက ပုဂျွန်ကြိုက်တယ်…
မရမ်းသီးအမှည့် ချိုချဉ်ဆို အရမ်းကြိုက်… မရမ်းသီးစိမ်းသုတ်တော့ အရင်တပတ်တင်ကတည်းက စားချင်နေတာ.. မသုတ်ဖြစ်သေး..
မရမ်းခြောက်နဲ့ချက်တဲ့ မွန်ဟင်းတွေထဲ သများကြိုက်တာက.. ဝက်စင်းကောနဲ့ ငါးနှပ်ဟင်းချို… ကွန်ပူတာနဲ့ဝင်မှနည်းရေးပေးမယ်… :))
-သများတောင် ဟိုနေ့က မရမ်းသီး အ၀ါရောင်တွေ ၀ယ်ပီး
-ငံပြာရည် ငြုတ်သီးမှုန့်နဲ့ နယ်စားပလိုက်တယ်..
မရမ်းသီး အဝါ အမှည့်ကို မှောင်မှောင်သည်ဆီကပဲ စားဖူးတယ်။
မရမ်းသီးကမကြိုက်လို့ ကြုံမှစားဖြစ်တယ်။ တကူးတကတော့လုပ်မစားဖြစ်ဖူးရယ်။ ဒါပေသိ မရမ်းသီးငပိချက်အပေါ်ကပုံကကော စားရသလားဟင် သူကကောမရမ်းသီးပါလားဟင်
မနေ့ကမှ ဒီ ပို့(စ) အတွက် အမှီချက်တဲ့ ၂ ခွက်။
အဲ့ပုံ အပေါ်က ဘာပေါ်နေလဲ။
မရမ်းသီးကို ဗိုက်စ်က အတော်ခံတွင်းတောင်းသော်လည်း ဒီမှာမရှိဘူး…
မရမ်းပြားခြောက် ငပိစိမ်းစားနဲ့ချက်တဲ့ မွန်ဟင်းတွေလည်း ကောင်းမှကောင်း…
ကျောက်စ်ကတော့ သွားကြိမ်းလို့ မရမ်းသီးသုပ် မကြိုက်… ခွိ
ဝက်သုံးထပ်သား ၃၀-သားလောက်ကို ရေစင်အောင်ဆေးပြီး အရွယ်တော်တုံးပါ ။ ချင်းနဲ့ စပါးလင်ကို ညက်နေအောင်ထောင်းထားပါ ။ ပြီးရင် ဝက်သားကို နနွင်း ၊ ဆား ၊ သကြားအနည်းငယ် ၊ ချင်းနဲ့ စပါးလင်ထောင်းတို့ကို ထည့်ပြီး နှံ့အောင် နယ်ပါ ။ ငရုတ်သီးအပွတောင့်ကို ကြက်သွန်ဖြူ ကြက်သွန်နီနဲ့ ရောထောင်းပါ ။ မရမ်းပြားခြောက် ၄-ခုလောက်ကို ရေစင်စင်ဆေးပြီး အသင့်ပြင်ထားပါ ။ ရယ်ဒီဖြစ်ရင် ထောင်းထားတဲ့ ငရုတ်သီး ကြက်သွန်တို့ကို မီးအနေတော်နဲ့ ဆီသတ်ပါ ။ အနံ့မွှေးလာရင် ငါးပိစိမ်းစား ဂေါ်လီလုံးလောက်ကို ရေနဲ့ဖျော်ထည့် ၊ အသားမှုန့်ထည့် ၊ နယ်ထားတဲ့ ဝက်သားနဲ့ မရမ်းပြားထည့်မွှေပြီး ၊ အဖုံးအုပ် လုံးချက်ချက်ပါ ။ ပထမတစ်ရေခမ်းပြီး ဆီပြန်မှ နူးအောင် နောက်ထပ်ရေထည့် ၊ အသားနူးရင် အရသာပြင်ပြီး ရှလွတ်စ်ပါ … ဒါဗြဲ ။ ကြိုက်တတ်ရင် အိုးချခါနီး ငရုပ်သီးစိမ်းတောင့်လေး အုပ်လိုက်… ဗဲထီးဂွဒ်
ဦးကျောက်ပြန်လာ ထမင်းဆိုင်ဖွင့်ပါ့လား ဆွိနဲ့ပေါင်းပြီး
ဆွိရယ် အစဆုံးလည်း ဖတ်ပြီးရော တံတွေးတွေမြို ပြီး သွားတွေ ကျိန်းကျန်နေခဲ့တယ်
ဒါနဲ့ ငါးပိစိမ်းစားကို မီးဖုတ်ဖို့ လိုသေးလားဟင်…..
ဒီအတိုင်း ရေဖျော်ပြီး ထည့်လိုက်ရုံတင်ပါပဲ…
အကို့ မိန်းမ က အိပ်ချင်သည် လို့ ပြောမှာပေါ့
အကိုက ခရီးရှည်က အခုမှ ပြန်ရောက်တာ ကိုးးးးး
ဒီ လူဂျီးးး ညှီဘီ
ဒီနေ့အိမ်မှာ ၀က်သားလိုင်းသား(အိမ်က အဆီမစား)ကို မရမ်းပြား/သရက်ပြားနဲ့ အစပ်ချက်တယ်။ဦးကျောက်စ်ချက်သလိုတော့ အဆာပလာ မစုံဘူး။
မရမ်းသီးစိမ်းလေးတွေ ဈေးထဲမှာတွေ့ခဲ့တယ်။ တဆယ်သား 500 တဲ့။မရမ်းသီးထောင်းလုပ်စားမယ်။
ငယ်ငယ်က အင်မတန်အားပြီး မရမ်းသီးတွေကပေါလွန်းတော့
သကြားကို ညောင်စေးကျအောင်ကျို ၊
ပြီးရင် ပြန်ဆယ်။ကျဲသွားတဲ့ သကြားရည်ကိုပြန်ကျို။
အဲသလို ပြုတ်လျှော ၃-၅ကြိမ် လုပ်ရင် မရမ်းယို ကြွပ်ကြွပ် အစိမ်းရောင်ရတယ်။
သရက်ပြား/မရမ်းပြားခြောက်ကိုကျတော့ ထန်းလျက်ရည်နဲ့ ယိုထိုးတယ်။
အဲဒါကျတော့ ပြန်ဆယ်စရာမလို။ ငရုပ်သီးမှုန့်၊မဆလာ၊နွယ်ချိုမှုန့်၊ဆားထည့် ။၀တ္ထုတအုပ်ဘေးချပြီး စားလို့ကောင်းမှကောင်း။
အာတီဒုံ ပြောတာ စဆုံးး ဖတ်ပြီးးး
၀က်သားနဲ့များချက်ချင်ရင်လေ.. အိန္ဒိယကလာတဲ့.. သရက်သီးသနပ်နဲ့ချက်လို့ရသဗျ..။
မဆလာနံ့နဲ့ ဝက်သားကို ကြိုက်တတ်ရင် ရှယ်ပေါ့သဂျီးရယ်…
ငပိစိမ်းစားမထည့်ပဲ သရက်သီးသနပ်အနှစ်ရယ် အဆာပလာတွေရယ်ကို…
ဝက်သားနဲ့ ရောနယ်ပြီးလုံးချက် … ဆီပြန်ရင် သရက်သီးဖတ်လေးထည့်…
သရက်သီးခြောက် ဇီးဖြူသီးခြောက် တွေနဲ့ချက်တဲ့…
ဂန္တဝင် ဝက်သားဟင်းလေးချက်ဆိုတာရှိသေးတယ် ခင်ဗျ…
ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင်အတွက် လူထုဒေါ်အမာရဲ့ ထောင်ဝင်စာဟင်း…
မဆလာနဲ့ဝက်သား.. အဲဒီကုလား-တရုတ်ချစ်ကြည်ရေးအစာ.. မကြိုက်ပါဘူး…။
သွားလေဂန္တ၀င်လူကြီးများရဲ့.. ဂန္တ၀င်ဝက်သားဟင်းလေးချက်ကိုတော့.. တော်တော်စိတ်ဝင်စား..
ဟိုးငယ်ငယ်ကိုရင်ဝတ်ကတည်းက.. ကပ္ပိယကြီး ဟင်းကျန်တွေအကုန်ပစ်ထည့်တဲ့.. ဟင်းလေးဟင်းကိုကြိုက်လိုက်တာ..
သရက်သီးခြောက် နဲ့ သနပ်နဲ့ ထည့်ချက်ရင် မတူဘူးရယ်။
ဝက်သား ၃ ထပ်သားနဲ့ သရက်သီးသနပ်ချက် ပဲ ချက်လိုက်တော့လေ။
သရက်သီးခြောက်ကတော့ လူကြုံနဲ့မှာရင် ရမယ်ထင်တယ်။
အဲဒီ ဝက်သားဟင်းလေးချက်ကို ဖတ်ပဲ ဖတ်ဖူးပြီး မချက်ဖူး မစားဖူးဘူးဗျ။
ကျနော့ အဖေက ရွာမှာ ဘုန်းကြီးကျောင်းသား ဘဝတုန်းက ဟင်းပေါင်းဟင်းကို အတော်တမ်းတတတ်တာမို့
အဲဒီက အသားဖတ်သေးသေး ရှာစားရတာကို အတော်ရင်ခုန်ရတယ်ဗျ။
.စားစရာတွေအားလုံး ကိုယ်သာမလုပ်ရလို့ကတော့ ကြိုက်ပီးသားပဲ
ကိုယ်မချက်ရတဲ့ ဟင်းက ပိုစားကောင်းတာတို့ ဘာတို့..
စာဖတ်သူများကို သရေယိုအောင် လုပ်နေပါပီ..
မရမ်းသီးဆို အစိမ်းစား၊ ယိုထိုးစား၊ ဆေးသကြားစိမ်စား၊ အခြောက်လှန်းစား၊
သုပ်စား၊ တမျိုးမျိုးနဲ့ ချက်စား၊ ဘာကျန်သေးလဲ…
အကုန်ကြိုက် အချဉ်ကြိုက် ဘာဆိုလားပဲ….
မရန်းပြား အစပ်ထုတ် အကြိုက်ဆုံးပဲ။
ဒီရက်ပိုင်း လုံးဝ မအားလို့ ရွာထဲမရောက်တဲ့ကြားက
အခုလို အချိန်ပေးပြီး ၀င်တောင်းပန်သွားတာပါ။
ကိုကိုနို ကို ခွင့်လွှတ်ပြီးးသားးးး
မရမ်းးးသီးး မကြိုက်တဲ့ သူဂျီးးတော့ စိတ်ဆိုးးတယ်.
ဒီညနေ ကြက်ဘူးသီး ကာလသားချက်နဲ့ မရမ်းသီးထောင်းချက်မှာ
မရမ်းသီးသုတ်ဆို မရမ်းသီးကို ပါးပါးလေးမှ ပါးပါးလေးလှီးရင် ပိုကောင်းတယ်ထင်။ မရီးသီးငါးပိထောင်းလည် ကောင်းတယ်။ မရမ်းသီးငါးပိချက်ကလည်း စားကောင်းတယ်။ မရန်းသီး ပုစွန်ဆိတ်ကြော်တော့ မစားဖူးသေးဘူး။